Thursday October 18, 2018 - 15:58:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka nagasoo gaaraya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada Gummeysiga Kenya Caruur ku dileen dad kalana ay dhaawaceen deegaanno ka tirsan Gedo.
Deegaanka uu ka dhacay dilka ay geysteen Ciidamada Kenya ayaa lagu magacaabaa Barmiil oo hoos yimaad Faafaxdhuun oo saldhig melleteri ay ku leeyihiin soo duulayaasha Kenya.
Sida ay warbaahinta xaqiijiyeen dad ku sugan Gedo illaa 3 Carruur ah oo wali aan qaan gaarin ayay Ciidamada Gummeysiga Kenya si bareer ah ugu dileen deegaanka Barmiil halkaas oo ay duullaan ku tageen.
Carruunta ay laayeen ciidamada Kenya ayaa xiliga la dilayay waxay la joogeen Awoowgood iyo iyo Ayeeyadooda oo ku sugnaa goobta uu dilka ka dhacay .
Ciidamada Gummeysiga Kenya ayaa sidoo kale dhaawacay Awoowaha iyo Ayeeyada waalidka u ah Carruuta la xasuuqay sida ay sheegeen dadka deegaanka oo gaaray goobta dhibaatadu ka dhacday.
Waalidiinta ay dhaawaceen ciidamada Gummeysiga Kenya ayaa lagu kala magacaaba Batuulo Maxamuud oo 60 sano jir ah iyo Hilowle Cabdullaahi Nuur.
Suldaan Maxamed Suldaan Xaaji Cabdi Suldaan Guure oo ka mid ah Salaadiinta gobolka Gedo ayaa ka warbixiyay qaabka ay wax u dhaceen wuxuuna sheegay in ciidamada Kenya ay duullaan maata layska ah ka wadaan gobolka.
Dilka ay Ciidamada Gummeysiga Kenya ka geysteen Gedo ayaa kusoo aadaya xili shalay deegaano hoos yimaada Faaxfaaxdhuun uu ka dhacay weeraro dhabbagal ah oo ay Al Shabaab udhigeen xilli ay kusii jeedeen dhanka deegaanka Garilleey.
Weeraradasi ayaa lagu gubay laba ka mid ah gaadiidkii ay wateen Ciidamada Kenya iyadoona tiro askar ah looga dilay, ciidamada Kenya ee xoogga ku jooga gobollada Gedo iyo Jubbada dhexe ayaa xasuuq ku haya shacabka rayidka ah.